Waxgaradka gobolka Cayn oo jaaliyadda gobolkaasi ka cosaday in ay ka qaybqaataan dhamaystirka dhismaha garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle. – Radio Daljir
Waxgaradka gobolka Cayn oo jaaliyadda gobolkaasi ka cosaday in ay ka qaybqaataan dhamaystirka dhismaha garoonka diyaaradaha ee Buuhoodle.
Buuhoodle,Dec,19 -Odayaasha iyo waxgaradka gobolka Ceyn ayaa maanta booqday halka lagu wado in laga hirgaliyo garoonka diyaaraha ee degmada Buuhoodle,waxaana ay kacodsadeen jaaliyadaha dibadda ee gobolka Cayn inay ka qaybqaataan dhamaystirka dhismaha garooonka diyaaradaha oo xiligaan marayo heer gabogabo ah.
Garaad Cabdulaahi Garaad Soofe oo ka mid ah waxgaradkii booqday dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Buuhoodle ayaa waxaa uu u mahadceliyay jaaliyaddaha gobolka Cayn iyo dadka gudaha jooga ee ka qaybqaatay dhismaha garoonka.
Garaadka ayaa tilmaamay garoonka inuu marayo heer gabagabo ah,waxaana uu ka codsaday jaaliyadaha dibadda ee gobolka inay ka qaybqaataan dhamaynta dhismaha garoonka oo uu sheegay inuu marayo heer gabogabo ah.
Garaad Saleebaan Buuraale ayaa dhankiisa u sheegay saxaafadda intii uu booqanayay garoonka in garoonka uu ku yaalo dhul istiraatiiji u ah dalka Soomaliya,islamarkaana uu rajaynayo garoonka hadii lagu guulaysto hirgalintiisa inuu noqon doono garoon caalami ah.
Garaad Saleebaan ayaa sheegay Airportka inuu yahay mid faa’iido wayn u leh bulshada gobolka iyo hay’adaha caalamiga,waxaana uu kula dardaaramay bulshadu inay sii wadaan howlaha dhisme ee xiligaan airportka maraayo.
Dhismaha garoonka diyaaradaha ee la doonayo in laga hirgaliyo magaalada Buuhoodle ayaa soconaya mudo laba sano ah,waxaana garoonka ka qaybqaadanaya jaaliyadaha gobolada SSC iyo qaar ka mid ah bulshada deegaanka ku dhaqan.